Ejipta : Nirehitra Ny Kianja Tahrir · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Desambra 2011 8:36 GMT
Vakio amin'ny teny Français, عربي, Español, Ελληνικά, 한국어, বাংলা, Português, Deutsch, 繁體中文, 简体中文, English
Narehitry ny Polisy Miaramila ny kianja Tahrir tao Kairo ary nanery ankolaka ireo mpanao hetsi-panoherana izay nanao fihetsiketsehana teo an-tokotanin'ny Lapan'ny governemanta nankalaza ny fitsingerenan'ny taona voalohan'ny revolisiona Arabo, izay vokatry ny fandoroana tena nataon'i Mohammed Bouazizi tao Sidi Bouzid, Tonizia. Ny mponina ao Ejipta dia tonga ao an-toerana mba hamatsy ny kaonty fijoroana vavolombelona mikasika ny zava-mitranga eny an-toerana amin'izao fotoana izao.
Ny fifandonana #OccupyCabinet dia nirongatra nandritra ny roa andro : olona valo no namoy ny ainy ary mihoatra ny 300 ireo naratra satria ny miaramila dia nanafika ireo mpanao fihetsiketsehana izay nilasy ivelan'ny foiben'ny governemanta tao Kairo roatokombolana lasa izay, olona izay nanohitra ny fanendren'ny miaramila ny Praiministra Ejiptiana Kamal El Ganzouri ho Praiministra vaovao tamin'ny fanombohan'ity volana ity.
El Ganzouri dia nanao famoriana mpanao gazety fotsiny, nanamafy fa ny miaramila dia tsy hanafika ireo mpanao fihetsiketsehana am-pilaminana mihitsy. Minitra vitsy taorian'izay, entona be no naparitaka tamin'ireo mpanao hetsi-panoherana, izay nanosika azy ireo hiala teo amin'ny kabinetra ary nanadio sy nandoro ny kianja Tahrir . Nizara ny fijoroany vavolombelony tao amin'ny kaontiny ireo mponina tao amin'ny Twitter tamin'ny fotoana nanoratako.
OneRevolution dia nibitsika hoe :
@nagoul1 : Misy vono olona mitranga ao #Tahri amin'izao #now!(fotoana izao) #egypt #NoScaf #MediaBlackout
Ary hiaka manao hoe :
@Nagoul1 : Very ny kianja ! #Tahrir #Egypt #NoScaf
Nanazava izy hoe : @nagoul1 : Ireo miaramila dia nampiasa bala tena izy mba hanaparitahana ireo mpanao hetsi-panoherana tao #tahrir -nanery azy ireo hiala ny ny foiben'ny governemanta mba ho any afovoan'ny kianja.
Ary nanambara ny heviny :
@nagoul1 : Avy aty amin'ny arabe fahatelo miala ilay tranga aho izao. Tena mikotaba be ilay izy.
Tao amin'ny Twitter, Sharif Khaddous dia nizara ito sary manaraka ito avy ao amin'ny kianja Tahrir amin'izao fotoana izao ary nanazava hoe :
Sharif Kouddous dia nizara ito sary ito avy ao amin'ny kianja Tahrir minitra vitsy izay tao amin'ny Twitter
@sharifkouddous : Andianà miaramila mihaodihaody ao an-kianja. Ny olona sasany dia voavonovono matetika. May ireo trano lay. Tahrir dia mitovy amin'ny tany fiadiana
Ilay mpanao gazety dia nanampy hoe :
@sharifkouddous : Ireo miaramila dia niditra tao amin'ny efitranonay ary naka ny fitaovana fakan-tsarinay
Toy ny mahazatra, tsy afa niala tamin'io fanafihana natao tamin'ny mpanao hetsi-panoherana io mihitsy ireo mpanao gazety. Hayat Al Yamani dia nandefa bitsika hoe ny mpiara -miasa aminy avy ao Al Jazeera Mubashar dia voasambotra koa .
@HayatElYamani : Ireo Polisy miaramila dia nisambotra ny mpiara-miasa amiko tao Al Jazeera Mubasher Ejipta izay naka sary iny madiva haraina iny
@HayatElYamani : Ireo polisy miaramila dia niditra an-keriny tao amin'ny toerana izay nakanay sary iny madiva haraina iny ary naka ny fitaovanay sy nisambotra mpiara-miasa telo taminay
Bel Trew koa dia tao amin'io sehatra io, nandefa bitsika mivantana. Indreto ny sasany amin'ireo bitsika nalefany tamin'ny fotoana nitrangan'ilay korontana :
@Beltrew : Nirehitra ny trano lay tao ” midan” [Kianja]. Feno miaramila eny rehetra eny ary tena mahery setra. Maheno fipoahana fa tsy fantatra raha feom-basy #tahrir korotam-be
@Beltrew : Noroahina ireo mpanao hetsi-panoherana, nitsoaka nandeha sisintsisiny tao anatin'ilay korontana. Tena mahatsikaiky #tahrir
Ary i Adam Makary dia nangataka hoe :
@adamakary : ny herisetran'i PM Ganzouri SAID dia tsy tokony ampiasaina amin'ireo mpanao hetsi-panoherana am-pilaminana, teo amin'ny folo minitra teo izay #Egypt
Ary nanampy hoe :
@adammakary : Ireo polisy miaramila dia naka ny kianja tahrir sy qasr el aini – rakotra azy ireo ny tafo rehetra sy ny fidirana amin'ny lalàna rehetra . Sary mampalahelo
Ary nizara ito sary ito koa izy :
Tahrir nirehitra. Adam Makary dia nizara ito sarin'i Tahrir mirehitra ito tao amin'ny yfrog
@adammakary : Ito dia #tahrir amin'izao fotoana izao, tsy hitako izay ho lazaina #egypt #occupycabinet
Nanazava toy izao izy :
@adamakary : Doran'ireo polisy miaramila avokoa ny tranolay, novelivelesiny avokoa ny fiara, ny zava-drehetra .. izay hita rehetra #egypt